Okwu nke Jiri
World Resorts	Okwu nke Jiri
Site na ịnweta saịtị a, ị na-ekweta-agbụ site na ndị a na saịtị weebụ usoro na ọnọdụ nke Jiri, niile na ọdabara iwu na ụkpụrụ, na-ekweta na ị na-ahụ maka nnabata na ọ bụla na ọdabara iwu obodo. Ọ bụrụ na ị anaghị ekweta na ihe ọ bụla nke usoro ndị a, na ị na-amachiri iji ma ọ bụ na ịnweta saịtị a.
Ikike e nyere ikike nwa oge download otu oyiri nke ihe (ọmụma ma ọ bụ software) na weebụ saịtị Meteodb ihe onwe onye, ​​na-abụghị azụmahịa adịru ikiri naanị. Ndokwa a nke ikike, ọ bụghị a transfer nke aha, na n'okpuru a ikike ị ghara:
Materials eji maka azụmahịa nzube ma ọ bụ n'ihi ọ bụla n'ihu ọha ngosi (azụmahịa ma ọ bụ ndị na-abụghị azụmahịa);
na-agbali decompile ma ọ bụ weghachie njinịa ọ bụla software ẹdude na weebụ saịtị Meteodb;
wepụ ihe ọ bụla nwebisiinka ma ọ bụ ndị ọzọ proprietary notations si ihe; ma ọ bụ
nyefee ihe onye ọzọ, "mirror" ihe ọ bụla ọzọ nkesa.
Nke a ikike ga-akpaghị aka chupu ma ọ bụrụ na ị na-emerụ ihe ọ bụla nke a mgbochi na nwere ike kwụsị n'oge ọ bụla Meteodb. N'elu imechi gị ikiri ndị a ihe ma ọ bụ n'elu nchupu nke a ikike, ị ga-ekpochapụ ọ bụla ebudatara ihe na ihe nketa gị ma na electronic ma ọ bụ e biri ebi usoro.
Materials na saịtị ndị Meteodb nyere "dị ka". Meteodb-eme ka mba warranties, egosipụta ma ọ bụ echiche, na ugbu disclaims na negates ndị ọzọ nile warranties, gụnyere-enweghị mmachi, echiche warranties ma ọ bụ ọnọdụ nke merchantability, mma maka otu nzube ma ọ bụ ndị na-abụghị ịda iwu nke ikike arịa amamihe ma ọ bụ ndị ọzọ ikike imebi. Ke adianade do, Meteodb anaghị enye ikike ma eme ka ọ bụla ihe oyiyi banyere izi ezi, o yiri results, ma ọ bụ ihe a pụrụ ịdabere na ojiji nke ihe na ya nrụọrụ weebụ ma ọ bụ n'ụzọ metụtara ndị dị otú ahụ ihe ma ọ bụ na ihe ọ bụla na saịtị jikọrọ saịtị a.
Na ọ dịghị ihe omume Meteodb.com ma ọ bụ ya suppliers-atụba maka ihe ọ bụla na-emebi (gụnyere, na-enweghị mmachi, na-emebi n'ihi ọnwụ nke data ma ọ bụ uru, ma ọ bụ n'ihi na azụmahịa nkwụsị,) ịda si eji ma ọ bụ enweghi ike iji ihe ndị na website Meteodb na ọbụna Meteodb Meteodb ma ọ bụ ikike nnọchiteanya e amara gị ọkwa ọnụ ma ọ bụ na odide nke ga-ekwe omume ndị dị otú ahụ na-emebi. N'ihi na ụfọdụ meworonụ adịghị ekwe ka-agaghị emeli na-egosi warranties, ma ọ bụ adịghị ike nke ibu n'ihi na ndị dị ma ọ bụ na-enwe na-emebi, ndị a na-agaghị emeli ghara itinye gị.
5. Mgbanwe na degharịa
Ihe ọkọnọ na weebụ Meteodb nwere ike ịgụnye teknuzu, mperi ndenye ihe wetara, ma ọ bụ foto njehie. Meteodb ekwe nkwa nke ọ bụla n'ime ihe na ya na saịtị ezi, zuru ezu ma ọ bụ ugbu a. Meteodb nwere ike ime mgbanwe ndị ihe ẹdude na ya weebụ n'oge ọ bụla na-enweghị tupu mara. Meteodb adịghị Otú ọ dị, eme ka ọ bụla nkwa imelite ihe.
Meteodb bụghị enyocha niile nke saịtị jikọrọ ya Internet na saịtị, na bụ bụghị maka ọdịnaya nke ọ bụla dị otú saịtị. Nsonye nke ọ bụla njikọ adịghị enye echiche mbianye Meteodb saịtị. Ojiji nke ọ bụla dị otú weebụsaịtị na gị onwe gị n'ihe ize ndụ.
7. Mgbanwe na Okwu nke Jiri
Meteodb nwere ike agụgharị ndị a usoro ojiji nke ya website n'oge ọ bụla na-enweghị tupu mara. Site na iji saịtị a, ị na-ekweta-agbụ mgbe nke ugbu a version nke ndị a Okwu nke Jiri.
General usoro na ọnọdụ ọdabara ojiji nke website.